Maindasitiri emagetsi maturusi, Maturusi ehunyanzvi, Midziyo yemagetsi mugadziri, Mhepo compressor mugadziri-ZHEJIANG JINGLI TOOLS CO., LTD.
7 * 24H mabasa
2017 Iyo kambani yakaparura nyowani nyowani mushure mekunyorwa - BIGO
2016 Yakanyorwa pamusika muna 2016
Zhejiang Jingli Zvishandiso Co, Ltd. yakaisa mari mufekitori nyowani, Iyo kambani nzvimbo morn kupfuura 39,000 mita metres, huwandu hwekudyara hunosvika kumamirioni makumi mana emadhora, nevashandi vanopfuura 40 vari kushanda, makumi masere vachishanda mukutungamira kwevakuru, makumi mashanu kushanda muhunyanzvi dhipatimendi rehunyanzvi.
2009, Zhejiang Jingli Zvishandiso Co., Ltd., yakasimbiswa. Nzvimbo yemiti yacho zviuru makumi maviri emamirimita. Yechipiri kubviswa kwebhizinesi, kuvhurwa kwematatu emhando yepamusoro -LEIYA, TANKS neZAO.
Yekutanga yekuzvivakira fekitori yakavambwa, inofukidza nzvimbo inosvika zviuru zvitatu zvemamirimita, uye pamwedzi paavhareji yekugadzira inokwana e3,000 yekucheka michina yakasvika 110 mayuniti.
Yekutanga 4110 yekucheka muchina yakaberekwa pamwe nekubatana kuyedza kweese murume nemukadzi, iyo zvakare yakaisa hwaro hwakasimba hweinotevera budiriro!
Kambani YEDU YAKAPINDA CHIRATIDZO GORE ROSE
KURUMBIDZWA KWAZHEJIANG JINGLI NOKUDZIDZA KWEMAHARA ANE ANOGONESESA ANOGONESESA MUSANGANO WEGUANGXI LIXIANGXIANG ELECTROMECHANICAL CO., LTD.
124 KABHONI ZVINOFANIRA
Tevera rumwe ruzivo muindastiri uye dzidza zvimwe zvigadzirwa zvigadzirwa